Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokatrano an'i Claude Ledoux | Wayne Peterson: Fanahy roa miaraka miaraka mamaha ny piozila taloha - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Fomba fiaina: Hita tao amin'ny "http://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Ahtunre&oldid=7552525" Sokajy:
Spirit Being Ahtun Re dia manonona “Ledoux”
Io tranga io dia tsy manan-tsahala, satria voavaha tamin'ny alalan'ny ezaka mitambatra avy amin'ny fanahy roa, Ahtun Re sy Maitreya. Maitreya dia toe-tsaina manjavozavo izay nahazoan'i Wayne Peterson fifandraisana an-telepatika nandritra ny am-polo taona. Miresaka momba ny fihaonany tamin'i Maitreya ao amin'ny bokiny izy, Fotoana hafahafa, Zava-mahagaga.
Hatramin'ny nahatongavan'i Wayne ho namako akaiky dia nieritreritra aho fa mety ho fantatro izy tamin'ny lasa. Wayne dia mpanakanto voajanahary, na dia tsy nandray lesona mihitsy aza izy tamin'ny fiainany. Ity sary eto ambany ity dia ny efitranon'i Wayne. Tsindrio ny sary hanitatra. Novany ara-bakiteny ny tranony maotina any Las Vegas ho lasa lapan'ny zava-kantony. Wayne aza nandoko rindrina tamin'ny rindrin'ny garazy. Ity rindrina ity dia omena eo ambany ny efitrano fipetrahan'i Wayne, izay misy sary eo ambanin'ny varavarana arched.
Tao amin'ny fivoriana iray niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontaniako raha efa nanjavona i Wayne nandritra ny Revolisiona Amerikana, tahaka ny niainako nandritra ny vanim-potoana niavaka. Ahtun Re, ilay torolalan'ny fanahy izay niarahako tamin'ny alalan'i Kevin Ryerson, izay nampiseho ny fahaizan'ny fiainana ny fiainany tamin'ny diany, dia nilaza tamiko fa nanjavona i Wayne nandritra io vanim-potoana io, fa tany Frantsa sy dia nifandray tamin'ny Fitsarana Frantsay. Taorian'ny fanontaniana dia nilaza i Ahtun Re fa ny anaran'i Wayne tamin'io fotoana io dia "Ledoux." Nanoratra ho ahy ihany koa i Ahtun Re.
Ny Fanahy Maitreya, manome an'i Wayne fanazavana momba an'i Ledoux
Tamin'io fampahalalana io dia niezaka ny hahita ity Ledoux ity ara-tantara saingy tsy nahomby. Nandalo ny fampahalalana tao Wayne aho ary namela irery ny olana. Nifandray tamiko enim-bolana i Wayne tamin'ny herintaona taty aoriana. Soa ihany fa tonga tao an-tsaintsika i Maitreya, momba an'i Ledoux, izay nanome baiko an'i Wayne tamin'ny televiziona. Mahagaga fa i Wayne no miezaka mandray ireo hafatra telpatikaly ireo rehefa manatanteraka ny alahelony maraina. Andro iray mahazatra, raha i Wayne kosa nidera ny volombavany, dia nahazo hafatra hafahafa izy:
"Raha te hahita an'i Ledoux ianao dia jereo ity gazety ity."
Tao an-tsainy, dia nahita sary mazava momba ny fonon'ilay olana manokana i Wayne Architectural Digest, feno ny habeny sy ny isa. Wayne tatỳ aoriana dia nandidy ity olana ity ary rehefa nahazo izany izy dia namaky azy io ho rakotra, fa tsy nahita na inona na inona teo amin'ny Ledoux. Nandeha sy niverimberina ny fotoana nodiaviny, nahazo hafatra hafahafa hafa i Wayne:
"Raha te hahita an'i Ledoux ianao, jereo ato amin'ity toko ity."
Nahita lahatsoratra manokana tao amin'ny Wayne avy eo i Visne Architectural Digest Nosoratany ankehitriny izy, izay misy pejy vitsivitsy monja. Wayne mamaky sy mamerina ilay lahatsoratra imbetsaka, fa tsy Ledoux.
Rehefa nilaza tamin 'ny namanao ny fahasosorany izy fa tsy afaka nahita an'i Ledoux, dia namaly izy hoe: "Angamba tokony hijery akaiky kokoa ianao. Nomeko lanjalanjely ho anao aho, nahoana ianao no tsy mampiasa izany? "Wayne dia nihevitra voalohany fa hevitra ratsy izany, saingy nanaraka ny soso-keviny izy. Nifantoka tamin'ny sarin'ny lehilahy iray izy, ilay lohahevitry ny lahatsoratra, izay nipetraka teo anoloan'ny fitoeram-boky. Noho ny fientanentanany lehibe, rehefa nianatra ny boky tao amin'ny trano famakiam-boky izy, dia nahita boky mainty miaraka amin'ny taratasy amam-bolamena izay nanana ny lohateny Ledoux.
Nandeha tao amin'ny Internet i Wayne ary nahita fa azo jerena io boky io ary nandidy izany izy. Rehefa nahazo izany izy, dia hitan'i Wayne fa nifandray tanteraka tamin'ity mpanao asa tanana ity sy ny mpanao trano Claude Nicolas Ledoux izy, satria mifanaraka amin'ny sary nataon'i Wayne nandritra ny taona maro ny zavakanto sy ny architecture. Fantatr'i Wayne ankehitriny fa ny talentany amin'ny sary hosodoko ara-javakanto dia avy tamin'ny lohan'i Ledoux, na dia ny sehatr'ireo Venetiana nofidiany handoko dia nentanin'ny fampianarany Francesco Foscari.
Wayne koa dia nanamarika fa nanamboatra tetikasa manokana tamin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao izy nandritra ny androm-piainan'i Ledoux. Ohatra, Ledoux dia nirahin'ny Mpanjakan'i Frantsa mba hanamboatra tanàna iray. Ledoux dia namorona fiarahamonina iraisana, nanipika fa ny hatsaran-tarehy dia tsy maintsy anisan'ny tontolo iainana ho an'ny mponina rehetra, tsy ho an'ny mpanohitra fotsiny fa ho an'ny tantsaha ihany koa. Wayne dia nampahatsiahy fa fony izy mbola zaza dia hamorona ilay tanàna Utopiana iray ihany avy amin'ny fotaka ao an-tokotany.
Ny fiainana an-tany dia mahatsiahy: Wayne dia mamerina mamolavola ny Design Ledoux
Ankoatra izany, i Wayne dia nandoko sary an-drindrina iray teo amin'ny rindrin'ny garazy izay namerina naka ny lahatsoratr'i Ledoux. Wayne dia namorona ity sary mihetsika ity talohan'ny nahalalany ny fiainany Ledoux. Ao amin'io sary hosodoko io, sary an-kavanana sy ankavanana, dia nandoko ny varavaran'ilay vavam-baravarana i Wayne teo aloha, izay nampiasaina hamoronana tontolo iray. Eo ambanin'ny varavaran'ilay vato voavoatra dia hazo eucalyptus boribory ary lavidavitra, misy trano fanorenana. Ledoux dia namorona lamina mitovy 200 taona maromaro talohan'io, nampiasa ny andohalik'ilay tetezana vato teo anoloana mba hamoronana tontolo iray. Eo ambanin'ilay andohalambo ny tetezana vato, dia hita ihany koa ilay hazo eucalyptus, ary eny lavitra eny, misy tranobe misy tanàna. Ny fampitahana ireo sary roa ireo dia omena etsy ambany. Kitiho ny fampitahana mba hanitarana azy io.
Ankoatra ity ohatra ity, amin'ny tranga vao teraka indray ao amin'ny vatana vaovao Gauguin ary Picasso, dia ho hitantsika koa ireo ohatra mampihetsi-po momba ny fivoaran'ny kanto amin'ny fomba tsy fantatra, avy amin'ny fampidirana iray hafa.
Fitoviana ara-batana: Ny endrik'i Wayne dia mifanaraka amin'ny an'i Claude Ledoux.
Innate Past Life Talent: Ledoux dia mpanao mari-trano sy mpanakanto matihanina. Wayne dia nampiseho tamin'ny fomba lehibe ny fanaovana sary hosodoko, tsy nisy naka kilasy zavakanto. Wayne dia nanamboatra sary an-drindrina iray tao amin'ny garazy izay nanenika ny tontolon'i Ledoux izay nanao fanandramana mitovy. Na dia toa niainga tamin'ny fiainana nandritra ny androm-piainan'i Ledne aza ny talentan'i Wayne, ny lohahevitra tiany indrindra avy any Venezo dia mampiseho ny fitiavan-tena ho an'i Francesco Foscari.
Ny Fanahy Mitarika: Ahtun Re, ny fiasan'ny fanahy izay miara-miasa amin'i Kevin Ryerson, dia nanome ny anarana manokana hoe "Ledoux", miaraka amin'ny fitenenana marina, amin'ny fampahafantarana ny fiainan'i Frantsa tamin'ny Wayne. Maitreya, ilay fanahy izay nahazoan'i Wayne fifandraisana ara-telefaona nandritra ny taona maro, avy eo dia nanome ny fomba hitadiavana an'i Ledoux ara-tantara tamin'ny fanehoana an'i Wayne olana manokana Architectural Digest.